महँगी | Nagarik News - Nepal Republic Media
किन फरक तरिकाले मनाउने यो दसैं?
बजारसँग व्यापारी र चाडपर्वसँग उपभोक्ता जोडिन्छन्। चाडपर्वमा सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी किनमेल हुन्छ। सामान्य जीवन व्यवहार चलाइरहेका आम नेपालीले चाडपर्वमा मात्रै भए पनि मिठो मसिनो र राम्रो लुगा लगाउने मानसिकता र परम्परा रहि आएको छ। यहि मानसिकता र परम्पराको गलत फाइदा उठाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ नेपालको बजार र व्यापारीलाई।
सुभद्रा धिताल २२ आश्विन २०७८ शुक्रबार ५ मिनेट पाठ
तामाकोसी ढिलाइले कति घाटा ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तामाकोसीको बिजुली प्रतियुनिट ४.०६ रूपैयाँको दरले किनेर प्रतियुनिट औसतमा ९ रूपैयाँ ५० पैसाको दरले बिक्री गर्न सक्थ्यो। आयोजना तोकिएको समयमै नबन्दा प्राधिकरणले पनि प्रत्येक वर्ष १० अर्बको दरले ६ वर्षमा ६० अर्ब रूपैयाँ आम्दानी गुमाएको छ। यो आयोजनामा सेयर लगानी गरेका लगानीकर्ताले पनि ६ वर्षको अवधिसम्म प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
हिमाल लम्साल ७ भाद्र २०७८ सोमबार ७ मिनेट पाठ
खानेतेलमा ४५ र गेडागुडीमा ४० रूपैयाँसम्म महँगी
गत साउनमा तोरी तेलको मूल्य प्रतिलिटर २२५ रूपैयाँ थियो। अहिले २० रूपैयाँ २४५ रूपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै सनफ्लावर तेलको मूल्य प्रतिलिटर १६५ रूपैयाँबाट बढेर २१० पुगेको छ। सनफ्लावर तेलमा लिटरको ४५ रूपैयाँ मूल्य बढेको छ। भटमास तेलको मूल्य पनि ४५ रूपैयाँ बढेको छ। साउनमा पोखरामा भटमास तेलको मूल्य लिटरको १५५ रूपैयाँ रहेकोमा अहिले २०० छ।
सन्तोष पोखरेल १४ फाल्गुन २०७७ शुक्रबार ३ मिनेट पाठ
रासस ३० असार २०७७ मंगलबार १ मिनेट पाठ
सुर्तीको मूल्य पाँच गुणा बढी, सीमा क्षेत्रमा तस्करी बढ्यो
लकडाउनका कारण बजारमा सुर्तीको मूल्य पाँच गुणा बढेको छ। १० रुपैयाँ पर्ने सुर्ती यतिबेला ५० रुपैयाँमा बिक्री भैरहेको छ। लामो लकडाउनसँगै बजारमा सुर्तीको अभाव भएपछि मूल्य ह्वात्तै बढेको हो।
योगेश रावल ३० जेष्ठ २०७७ शुक्रबार ३ मिनेट पाठ
महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न संयुक्त विद्यार्थी संगठनको माग
अनेरास्ववियू पाचौंको कार्यालय रातोपुलमा बसेको विद्यार्थी संगठनको संयुक्त बैठकले चार बुँदे मागसहित संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
नागरिक १२ आश्विन २०७६ आइतबार २ मिनेट पाठ
आर्थिक संकटको पीडा खेप्दै आएको पाकिस्तानमा कृषि क्षेत्रका उत्पादनहरुको मूल्य अकासिएको छ। राष्ट्रिय ढुकुटी रित्तिदै जाँदा त्यसको असर कृषि क्षेत्रमा देखा परेको हो। हाल पाकिस्तानको मुद्रास्फीति दर दोहोरो अंक नजिक छ।
नागरिक २६ भाद्र २०७६ बिहीबार २ मिनेट पाठ
भाटभटेनी सुपर मार्केटमा आजकल एक किलो चिनीको मोल ७२ रुपैयाँ पर्दछ। दसैं, तिहार, छठ जस्ता चाडपर्वको समयमा ५९ रुपैयाँ किलो चिनी बेचेको भाटभटेनी केही साता अघिसम्म ६९ रुपैयाँमा बेच्दैथ्यो। आजकल ७२ कायम छ। बजारमा सामान्य तथा ७५ रुपैयाँ किलोमा चलेको छ।
विश्वमणि पोखरेल २३ फाल्गुन २०७५ बिहीबार १५ मिनेट पाठ
बजारमा यतिबेला रातो आलुको थोक मूल्य किलोको २० देखि ३० रुपैयाँ छ। पोहोर पनि यो बेला आलुको मूल्य यही थियो। त्यस्तै प्याजको थोक मूल्य पनि पोहोर र अहिले एकैनास अर्थात् किलोको २५ देखि २८ रुपैयाँ छ।
सन्तोष पोखरेल १८ फाल्गुन २०७५ शनिबार ११ मिनेट पाठ
सीमा वारपारमा मूल्यमा भारी अन्तर
वीरगञ्ज सहरसँगै जोडिएको नेपाल–भारतबीचको दशगजा पारि विहार प्रान्तको सीमावर्ती सहर रक्सौल छ। पारि गुड्ने भारतीय रेलको आवाज वीरगञ्जमा मज्जाले सुनिन्छ। दुवैतिर बसोबास गर्ने मानिसहरुको संस्कृति र खानाको शैली उस्तैउस्तै छ। सीमापारिका मानिसको थालमा पस्किने खाना र वारिका मानिसको थालमा पस्किने खानाको लागत (मूल्य) मा भने भारी अन्तर छ। उनीहरुले सस्तोमा उपभोग गर्ने खाना नेपालीले महँगोमा पाउँछन्।
रितेश त्रिपाठी १८ फाल्गुन २०७५ शनिबार ६ मिनेट पाठ
दिलीप पौडेल १८ फाल्गुन २०७५ शनिबार २१ मिनेट पाठ
दसैंको चहलपहलसँगै महँगी अकासियो
दसैंको चहलपहल बढेसँगै दसैंका लागि चाहिने सामग्री किनमेल गर्नेको बजारमा भीड बढेको छ । काठमाडौंको न्युरोड, असन, इन्द्रचोकलगायत स्थानमा आवश्यक सामग्री किनमेल गर्नेको भीड लागेको हो।
नागरिक संवाददाता ३० आश्विन २०७५ मंगलबार ३ मिनेट पाठ
समृद्धिलाई गफमा सीमित नगरौँ
बजारमा सवैखाले उपभोग्य सामग्रीको भाउ बढेको छ । यसको अर्थ पोहोर परारको तुलनामा महँगी थपिएको पनि उपभोक्ताले बिर्सिएका छैनन् ।
हरि रोका २५ आश्विन २०७५ बिहीबार २१ मिनेट पाठ
चाडपर्वको मुखमा महँगीको मार
चाडपर्वको मुखमा खाद्य सामग्रीमा आफूखुसी मूल्य बढाउने प्रवृत्तिलाई व्यापारीले निरन्तरता दिँदा पूर्वका सर्वसाधारणको भान्सा खर्च अकासिएको छ।
पूर्वेली ब्युरो २१ आश्विन २०७५ आइतबार १४ मिनेट पाठ
कुट्कुटेश्वरी तरकारी सप्लायर्स मनकवानपुरका सञ्चालकले आइतबार बल्खु तरकारी बजारका व्यापारी गणेश कार्कीलाई तरकारी बेचे।
दिलीप पौडेल १२ भाद्र २०७५ मंगलबार ७ मिनेट पाठ